Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.1.2 Manaova fanandramana anao manokana
Ankoatra ny lohany dia nopetahany takela fanandramana eo amin'ny tampon'ny-misy tontolo, ianao koa dia afaka manorina ny fanandramana manokana. Ny tena mahatsara ny fomba ity dia fanaraha-maso; raha manorina ny fanandramana, dia afaka mamorona ny tontolo iainana sy ny fitsaboana izay tianao. Ireo fanandramana bespoke afaka mamorona tontolo fahafahana mba hitsapana teoria izay tsy hain'ny mba hizaha toetra amin'ny tontolo voajanahary mitranga. Ny tena lafiny ratsy ny fananganana manokana fa fanandramana dia mety ho lafo vidy ary ny tontolo iainana fa ianao no afaka mamorona mety tsy hanana ny realism ny rafitra voajanahary mitranga. Mpikaroka fananganana ny fanandramana ihany koa dia tsy maintsy manana paikady ho an'ny mpilatsaka mpandray anjara. Rehefa in-misy rafitra miasa, indrindra ny mpikaroka dia nitondra ny fanandramana ny mpandray anjara. Fa, raha mpikaroka manao ny fanandramana, dia mila mitondra mpandray anjara ho azy. Soa ihany fa asa toy ny Amazon Mechanical Turk (MTurk) afaka manome ny mpikaroka ny fomba mety mba hitondra mpandray anjara ny fanandramana.
Ohatra iray izay mampiseho ny toetra ny bespoke tontolo ho saro-takarina teoria no naka fanahy ny nomerika laboratoara fanandramana amin'ny Gregory Huber, Seth Hill, ary Gabriel Lenz (2012) . Ny fanandramana mandalina ny mety ho azo ampiharina mahasakana ny fampandehanana ny fitantanana demokratika. Tamin'ny fiandohan'ity tsy andrana fampianarana ny tena fifidianana milaza fa mpifidy dia tsy afaka hijery marina ny fanatanterahana ny am-perinasa mpanao politika. Indrindra indrindra, mpifidy toa mijaly avy telo mifanavakavaka: 1) mifantoka amin'ny vao haingana fa tsy fitambaran'ny fampisehoana; 2) manipulatable amin'ny kabary tsara lahatra, hanisy, sy ny varotra; ary 3) voasariky ny fisehoan-javatra tsy misy ifandraisany ny am-perinasa fampisehoana, toy ny fahombiazana ny ekipa eo an-toerana fanatanjahan-tena sy ny toetrandro. Ao ireo fianarana teo aloha, na izany aza, dia sarotra ny hatokana toerana misy ireo lafin-javatra avy amin'ny hafa rehetra ny zavatra izay mitranga ao amin'ny tena, tsy hoatr'izany fifidianana. Noho izany, Huber sy ny mpiara-miasa namorona tena notsorina mifidy tontolo iainana mba hitokantokana, ary avy eo tamin'ny andrana mianatra, tsirairay ireo telo azo atao mifanavakavaka.
Rehefa mamaritra ny fanandramana napetraka-up ambany no handeha toa solon-tena, fa tadidio fa tsy realism tanjona amin'ny laboratoara fomba fanandramana. Kosa, ny tanjona dia ny hatokana toerana mazava ny dingana izay miezaka ny hianatra, ary mafy io fitokana-monina dia tsy azo atao indraindray eo amin'ny fianarana bebe kokoa realism (Falk and Heckman 2009) . Ankoatra izany, amin'ny tranga manokana ity, ny mpikaroka nilaza fa raha toa tsy mahomby ny mpifidy afaka mandrefy fampisehoana ao amin'ny toerana tena tsotra, dia ny tsy ho afaka hanao izany amin'ny zava-misy kokoa, sarotra kokoa ny toerana.
Huber sy ny mpiara-miasa nampiasa Amazon Mechanical Turk (MTurk) handray mpandray anjara. Indray andro nisy mpandray anjara nanome fahalalana ampy manaiky ka nandeha fohy fitsapana, dia nisy nanambara tamin'i fa izy no nandray anjara tamin'ny lalao manodidina ny 32 mba hahazoana famantarana izay mety hiova fo ho tena vola. Tany am-piandohana ny lalao, ny mpandray anjara tsirairay dia nilaza fa izy efa nomena ny "allocator" izay hanome azy famantarana maimaim-poana isan-manodidina sy sasany allocators dia malala-tanana kokoa noho ny hafa. Ankoatra izany, ny mpandray anjara tsirairay ihany koa nilaza fa izy no manana ny fahafahana na hitandrina ny allocator na ho voatendry iray vaovao taorian'ny 16 fihodinana ny lalao. Noho ny zavatra fantatrao momba Huber sy ny mpiara-miasa aminy 'fikarohana tanjona, ianao dia afaka mahita fa ny allocator mampiseho ny governemanta sy safidy io dia maneho ny fifidianana, fa ny mpandray anjara dia tsy mahafantatra ny tanjona ankapobeny ny fikarohana. Raha atambatra, Huber sy ny mpiara-miasa nanakarama tokony ho 4.000 mpandray anjara izay nandoa ny $ 1.25 ny asa izay naka olona tokony ho 8 minitra.
Tadidio fa ny iray amin'ireo hita avy amin'ny fikarohana teo aloha dia hoe mpifidy valisoa sy hanasazy incumbents ho tsara ny vokatra izay mihoatra noho ny fanaraha-maso, toy ny fahombiazana ny ekipa eo an-toerana fanatanjahan-tena sy ny toetrandro. Mba hanombana raha mpandray anjara pifidianana fanapahan-kevitra mety ho voasariky ny kisendrasendra fotsiny ny zava-nitranga ao amin'ny faritra, Huber sy mpiara-miasa nanampy ny loteria ny fanandramana rafitra. Tamin'ny faha-8 na ny manodidina na ny faha-16 manodidina (izany hoe, mialoha ny vintana hisolo ny allocator) mpandray anjara no tsapaka napetraka tao amin'ny loteria izay nahazo ny sasany 5000 hevitra, ny sasany nahazo 0 hevitra, ary ny sasany very hevitra 5000. Zavatra tsy loteria natao mba maka tahaka ny tsara na ny vaovao ratsy izay tsy miankina amin'ny fampisehoana ny mpanao politika. Na dia mpandray anjara dia nilaza mazava fa ny loteria dia misy ifandraisany amin'ny fanatontosana ny allocator, ny vokatry ny loteria mbola fiantraikany mpandray anjara fanapahan-kevitra. Mpandray anjara izay nandray soa avy tamin'ny loteria dia azo inoana kokoa ny mitandrina ny allocator, ary vokatr'izany dia matanjaka izany, raha ny loteria nitranga in-tsara manodidina 16 teo anoloan'ny fanoloana fanapahan-noho rehefa nitranga in manodidina 8 (Sary 4.14). Ireo valiny, miaraka amin'ny vokatry ny maro hafa andrana ao amin'ny taratasy, nitondra Huber sy ny mpiara-miasa aminy mba hanatsoaka hevitra fa na dia ao amin'ny notsorina toerana, ny mpifidy no sarotra handraisana fanapahan-kevitra, vokatr'izany izay fiantraikany ho avy fikarohana momba ny mpifidy fanapahan-kevitra (Healy and Malhotra 2013) . Ny fanandramana ny Huber sy ny mpiara-miasa aminy dia mampiseho fa azo ampiasaina MTurk handray mpandray anjara ho an'ny laboratoara fomba mazava fanandramana mba hizaha toetra tena manokana teoria. Izany koa dia mampiseho hoe ilaina ny hananganana ny andrana manokana tontolo iainana: dia sarotra ny sary an-tsaina ny fomba mety ireo dingana ihany no mitoka-monina toy izany cleanly na inona na inona toe-javatra hafa.
Sary 4,14: Vokatra avy amin'ny Huber, Hill, and Lenz (2012) . Mpandray anjara izay nandray soa avy tamin'ny loteria dia azo inoana kokoa mba hitana ny allocator, ary vokatr'izany dia matanjaka izany, raha ny loteria nitranga in-tsara manodidina 16 teo anoloan'ny fanoloana fanapahan-noho rehefa nitranga in manodidina 8.
Ankoatra ny fanorenana laboratoara-tahaka ny fanandramana, dia afaka ihany koa ny hanorina mpikaroka fanandramana izay-zavatra bebe kokoa tahaka. Ohatra, Centola (2010) nanorina nomerika saha fanandramana nianatra ny vokatry ny tambajotra sosialy firafitry ny fihanaky ny fitondran-tena. Ny fikarohana fanontaniana maintsy azy hitandrina izany fihetsika miparitaka amin'ny mponina izay nanana rafitra tambajotra sosialy hafa, fa raha tsy izany dia indistinguishable. Ny hany fomba hanaovana izany dia amin'ny bespoke, fomba amam-panao-nanao fanandramana. Amin'ity tranga ity, Centola nanorina ny tranonkala ny fahasalamana ara-fiaraha-monina.
Centola nanakarama ny 1500 ny mpandray anjara amin'ny dokam-barotra ao amin'ny vohikala ara-pahasalamana. Rehefa mpandray anjara tonga teo amin'ny aterineto vondrom-piarahamonina-izay nantsoina hoe ny Healthy Lifestyle Network-dia toa nilaza fanekena, ary avy eo dia notendrena "fahasalamana buddies." Noho ny fomba Centola nomena ireo ara-pahasalamana buddies dia afaka nikambana samihafa tambajotra sosialy rafitra in hafa vondrona. Vondrona sasany dia naorina mba hanana kisendrasendra tambajotra (izay rehetra koa dia mety ho mifandray) sy ny vondrona hafa dia naorina mba hanana ny fampivondronana tambajotra (izay fifandraisana kokoa mikitroka an-toerana). Avy eo, Centola nampiditra vaovao ho fitondran-tena isan-tambajotra, ny fahafahana mba hisoratra anarana ho vaovao fanampiny vohikala amin'ny fanazavana ara-pahasalamana. Raha misy sonia ho ity tranonkala vaovao, ny fahasalamany rehetra buddies nahazo mailaka milaza fitondran-tena ity. Centola hita fa fitondran-fanaovan-tsonia-ho an'ny vohikala vaovao-niely bebe kokoa sy haingana kokoa ao amin'ny fampivondronana tambajotra noho ny kisendrasendra tambajotra, ny fitadiavana izay mifanohitra ny sasany efa misy teoria.
Amin'ny ankapobeny, ny fanandramana fananganana ny manome anao mihoatra fanaraha-maso; dia manome fahafahana anao ny tsara indrindra hanorina tontolo hitokantokana izay te-hianatra. Sarotra ny sary an-tsaina ny fomba andrana na ireo mety efa tanterahana amin'ny efa misy tontolo iainana. Ankoatra izany, ny fananganana ny rafitra manokana mihena etika olana manodidina ny fanandramana in-misy rafitra. Rehefa manao ny fanandramana manokana, na izany aza, mihazakazaka ho maro ny olana izay tojo amin'ny laboratoara fanandramana: mpilatsaka mpandray anjara sy ny olana momba ny realism. Ny farany lafy ratsiny no fananganana ny ny fanandramana dia mety ho lafo vidy sy mandany fotoana, na dia ho toy izany ohatra mampiseho, ny fanandramana dia afaka miainga avy somary tsotra tontolo (toy ny fianarana ny fifidianana amin'ny Huber, Hill, and Lenz (2012) ) ny somary sarotra tontolo (toy ny fianarana ny tambajotra sy ny areti-mifindra amin'ny alalan'ny Centola (2010) ).